Fabio | | Ukusetyenziswa kwe-Android
Flashback unikezela iifayile ezifihliweyo efini, enika abasebenzisi ukufikelela okukhuselekileyo kwidatha yabo kwaye iqinisekise khu seleko zazo. Flashback Masenze ikopi zokugcina yonke le nkqubo Androidkunye nomxholo ogcinwe kumakhadi e-SD.
Ngokuzenzekelayo, idatha igcinwe kuyo Amazon S3, Ukunika umsebenzisi ukuthembeka komboneleli weS3 kunye nokhuseleko lwedatha ukusuka Iinkqubo zokuhleba.
Itekhnoloji yethutyana ye Flashback igcina umkhondo wento esele igcinwe ngabasebenzisi, ke ukuba ifayile ayilungiswanga phakathi kolunye usuku kunye nolandelayo, isixhobo asiphindi senze backup yale.
Kwakhona, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba Flashback Ikwagcina umkhondo weebhloko ngaphakathi kwifayile, ke ukuba ifayile iguquliwe, kuphela ngamalungu amatsha aya kufumana ukhuphelo olutsha. Eli nqaku libonelela ngendawo epheleleyo ngaphandle kokuchitha ibhendi, ibhetri, okanye indawo yokugcina.
Flashback ifakiwe kwi I-WhisperCore 0.4 ukhuphelo simahla ukuze usetyenziselwe wena. Inguqulelo encinci ye Flashback ikwafumaneka kubasebenzisi be Ngobubele kwi I-Android Market.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » I-Flashback: Isigcini se-encrypted se-Android